Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga oo si Habsami Uga Socda Melbourne
Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga oo si Habsami Uga Socda Melbourne
Waxaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Melbourne ee dalka Australia shir sanadeedkii jaaliyadaha Pacific-ga. Shirkan oo sanadkii mar laqabto ayaa waxaa kasoo qaybgalay sanadkan 11 Jaaliyadood oo ka kala socda dalalka Pacific-ga.
Waxaa kaloo shirka sanadka ka qaybgalaya madax ka socota Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo uu horkacayo afhayeenka ururka mudane C/qaadir Hirmooge oo ay wehliyaan madax golaha dhexe ee jabhadda ka socota iyo Isu-duwaha jaaliyadaha Pasific-ga mudane Aadan daqare. Waxaa kaloo shirka martisaraf ku ah odayaal iyo indheergarad ka socda bulshada Somaliyeed ee dagan Australia iyo ururada mucaaradka ku ah xukuumadda EPRDF.
Shirka oo ay horyaalaan ajendo muhiim ah ayaa lagu falanaqayn doonaa arimaha quseeya halganka shacabka S.Ogadenya iyo guud ahaan dhacadooyinkii ugu dambeeyay ee gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka xidhiidhka tooska ah la leh qadiyadda Ogadenya. Waxaan kala socon doonaa faahfaahina dheeraad ah shabakadaha halganka iyo barnaamijyada IleysTV.